Uzo ozo di nma nke Gmail | Gam akporosis
Top 10 uzo ozo na Gmail
Ignacio Lopez | 13/04/2021 20:00 | Ngwa gam akporo
Ka anyị chee ya ihu, chọọ otu ọzọ na Gmail Ọ dịghị mfe, ebe ọ bụ na ọrụ ozi Google bụ otu kachasị mma, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọrụ email kachasị mma anyị nwere ike ịchọta ugbu a n'ahịa, ọkachasị ma ọ bụrụ na i jiri ọtụtụ ọrụ ọ na-enye.
You maara na Gmail na-enye anyị ohere ihichapụ a zitere ozi? Ma ọ bụ nke ahụ na-enye anyị ohere ịhazi izipụ ozi. O yikarịrị ka ịmaghị ọrụ ndị a ị gaghị eji ha, mana ha bụ ụfọdụ ọrụ Gmail na-enye anyị ma dị na ọrụ email ole na ole dịka Outlook.
Mgbe ị na-ahọrọ ọrụ nchekwa ozi, anyi aghaghi ichebara otutu ihe echiche, ihe kachasị mkpa bụ ikike nchekwa ọ na-enye anyị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọrụ anyị site na ọwa nkwukọrịta a dị oke elu.
Akụkụ ọzọ nke anyị na-aghaghị iburu n'uche bụ ma ọ bụrụ na ị na-enye anyị ngwa maka gam akporo ma ọ bụ anyị nwere ike iji ya na ndị ahịa email ndị ọzọ. Na nke ikpeazụ, nke a agaghị ekwe ka anyị nweta ọtụtụ uru na ekwentị anyị, ebe ọ bụ na ọrụ niile nke ikpo okwu nwere ike ịnye anyị agaghị adị.
2 Proton Mail
9 Koala ugbu a
Nhọrọ yiri nke kachasị na atụmatụ anyị nwere ike ịchọta bụ Outlook, ọrụ email nke Microsoft, ọrụ ozi nke akpọburu Hotmail na MSN, yabụ ọ bụrụ na ị ka nwere otu n’ime ndị a, ị nwere ike iji ọrụ niile ọ na-enye anyị mee ihe.
Outlook na-enye anyị ohere 15 GB nke nchekwa, oghere edebere naanị maka ozi ịntanetị anyị nwetara. Ọ bụrụ na mgbakwunye, kama ịga n'ihu na-eji Google Drive, anyị na-aga OneDrive, Microsoft na-enye anyị ohere nchekwa 5 GB.
Oghere a erughị 15 GB nke Google na-enye anyị, mana opekata mpe, anaghị ejikọta oghere ozi, yana Foto Google na nchekwa dị ka a ga - asị na Google mere, yabụ na anyị ekwesịghị ịmara mgbe niile iwepụta igbe ozi anyị oge ụfọdụ na-achọ ohere.
Otu ihe dị mma banyere Outlook, ọkachasị ngwa gam akporo, bụ na ha attentionara ntị na aro ndị ọrụ obodo na-atụ aro. N'ezie, site na ngwa ahụ n'onwe anyị anyị nwere nhọrọ iji zipu aro maka mmelite n'ụdị ọrụ ọhụrụ ma ọ bụ mgbanwe ndị dị.
Ngwa gam akporo na-enye anyị ohere inweta ọtụtụ ngwa ahụ, ọ bụ ezie na nhọrọ ị ga-ehichapụ ozi ezitere ma dozie nnyefe nke Oulook na-enye anyị site na ntanetị weebụ, ha adịghị na ngwa gam akporo.
Outlook maka gam akporo na-enyekwa anyị ohere jikọọ akaụntụ ọrụ nchekwa anyị dị iche na OneDrive (Microsoft), na-enye anyị ohere itinye akaụntụ nchekwa site na Dropbox, Igbe na Google Drive ọkachasị.
N'ihi ọrụ a, anyị nwere ike Gbakwunye faịlụ site na ọrụ ozi ndị a na ozi email ọ bụla anyị na-eziga site na ngwa ahụ, site na akaụntụ Outlook, Gmail, Yahoo ...
Ọ bụrụ na ebumnuche ndị manyere gị ịme n'enweghị Gmail bụ nzuzo, ihe ọzọ iji dobe data gị oge niile bụ iji Proton Mail. Proton Mail na-ezipụ ozi njedebe na njedebe, nke mere na ọ dịghị onye ọ bụla nwere ike igbochi ha n'ụzọ, nwere ike ịnweta ọdịnaya ha, gụnyere mgbakwunye.
Ngwa gam akporo a na - enye anyị ohere ịhazi ọrụ ozi a. Bụ ọrụ lekwasịrị anya na nzuzo ọ bụghị kpam kpam n'efu, ma ọ bụrụ na anyị nwere nhọrọ iji nsụgharị nweere onwe ya nke njedebe kachasị nke ozi ịntanetị bụ 500 MB.
ProtonMail - Email ezoro ezo
Developer: Proton Teknụzụ AG
Anyị na-ekwu maka ya ọzọ nke ndị dike ịntanetị aka na Yandex. Iji nye anyị echiche, Yandex na Russia bụ ihe Google dị n'ụwa. Ọ bụghị naanị na ọ bụ igwe nyocha, mana ọ na - emekwa ka ozi ozi ya mara Yandex Mail, ọrụ nchekwa na nkewa, nke dịịrị onye ọ bụla ...
Yandex na-enye anyị nzacha dị ike maka ozi ịntanetị achọghị na spam, yabụ na anyị ga-ahazi igbe mbata anyị ma dị ọcha. Naanị otu mana anyị nwere ike ịchọta na ngwa gam akporo bụ nke ahụ dị naanị na BekeeOtú ọ dị, ọ bụghị ihe zuru ezu ịghara ịnwale ya.
Ngwa gam akporo na-enye anyị ohere tinye akaụntụ email ọ bụla site na ọrụ ndị ọzọ gụnyere Gmail na Outlook, ọ dakọtara na ọnọdụ ọchịchịrị nke gam akporo ma nye anyị ohere ijikwa ozi ịntanetị site na ịpị ha na ihuenyo ahụ, dịka ngwa Gmail na Outlook maka gam akporo.
Developer: Ngwa Yandex
Yahoo nwere oge nke ebube ya na mbido afọ 2000, mgbe ọ bụ njin nchọgharị a na-ejikarị ya eme ihe n'ụwa niile. Agbanyeghị, na mbata Google, yana interface dị ọcha kpamkpam, ọdịda nke Yahoo bidoro.
Ọdịda a ka e mesiri ike n'ime afọ 5 gara aga, nke ahụhụ dị iche iche ọgụ na leaked ozi nke ọtụtụ nde ndị ọrụ. Mwakpo ndị a bụ ihe kpatara ụlọ ọrụ iji kpọgidere akara Aka Maka Ọrịre. Kemgbe 2018 ọ bụ akụkụ nke onye ọrụ US Verizon.
Ebe ọ bụ na Yahoo enweghị nsogbu ọ bụla iji melite ọrụ email ha, mana ruo taa, ọ ka bụ nhọrọ kachasị mma ọ bụrụ na mkpa gị bụ isi esi zipu, nata ozi-e na obere ihe ọzọ. Ngwa gam akporo na-enye anyị ohere ijikwa kalenda, dị ka Outlook na Yandex.
Yahoo Mail: igbe mbata omenala
Ọ bụrụ n'ịchọrọ iwere nzọụkwụ gị n'ihu itinye aka na gburugburu ebe obibi, a na-akpọ azịza anyị na-atụ aro posteo. Posteo bụ ọrụ email a na-akwụ ụgwọ (€ 1 kwa ọnwa) nke na-eji ike na sava Greenpace Energy, ike sitere na isi mmalite.
Ọ na-akwado usoro IMPA na POP, yabụ anyị nwere ike iji ozi email ọ bụla iji nweta enweghị nsogbu ọ bụla. Ọ na-agụnye ọ bụla ụdị mgbasa ozi, gị data na-adịghị na-ere ka ndị ọzọ na ọ na-enye ohere ka anyị zipu Mgbakwụnye nke na- 50 MB.
Ọrụ a, maka ugbu a, adịghị na Spanish na ọnụọgụ nke ọrụ bụ ihe ndị bụ isi anyị nwere ike ịchọta na ozi ozi ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị chọrọ iji a akaụntụ email metụtara na ngalaba, ihe ngwọta ị na-achọ ka achọtara na Tutanota. Tutanota bụ ọrụ email ezoro ezo na njedebe nke ngwa ya maka mkpanaka mkpanaka bụ oghe emeghe, dị ka nke eji na weebụsaịtị, nke mere na onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịlele otú o si arụ ọrụ na nzuzo ọ na-enye ndị ọrụ.
Tutanota na-enye anyị ohere ịmepụta ngalaba ahaziri iche, maka naanị 1 euro kwa ọnwa, maka ozi anyị na mgbakwunye na gụnyere 1 GB nke nchekwa efu. Ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka dabara na akaụntụ email nke ọrụ a. Site na iji POP ma ọ bụ IMAP protocol, anyị agaghị enwe ike ịhazi ohere ịnweta ọrụ a yana ndị njikwa ozi ndị ọzọ dịka Outlook ma ọ bụ Spark.
Tutanota: ozi ịntanetị echedoro
Developer: Tutao GmbH
Ihe na-akpali ọzọ na GmailỌ bụ ezie na a kwụrụ ụgwọ, anyị na-ahụ ya na Zoho Mail, ọrụ nke ọnụahịa ya dị ọnụ ala dị ọnụ ala na 0.90 euro kwa ọnwa na nchekwa 5 GB, yana euro 1,13 na 10 GB nchekwa.
O dakọtara na POP na IMAP ogbugba ndu ka anyị nwee ike iji ọrụ a ya na onye ozi email obula dị na gam akporo, ọ bụ ezie na ọ nwekwara ngwa nke aka ya maka gam akporo.
Otu ihe dị ịtụnanya n’ọrụ a bụ na ọ na enye anyị ohere kagbuo izipu ozi ịntanetị (dị ka Gmail na Outlook). Ọ gụnyere kalenda nke etinyere na ngwa ahụ yana anyị nwekwara ike iwebata na kalenda nke ama anyị.
Ọ na-enye anyị ohere na-adịghị n'ịntanetị, ngwaọrụ mmekọrịta, njikwa ọrụ, ndetu na ibe edokọbara ma nye anyị ohere itinye faịlụ ruru 250MB.
Zoho Mail - Email na Kalịnda
Developer: Lọ ọrụ Zoho
GMX bụ otu n'ime ọrụ ozi na-enye anyị ọrụ kachasị, ọkachasị n'ụdị akwụ ụgwọ, ebe ọ bụ na anyị nwekwara nsụgharị n'efu, ọ bụ ezie na ọ nwere ọrụ ole na ole. Ike nke GMX dị na mwekota na Office, mwekota nke na-enye anyị ohere idezi akwụkwọ sitere na ngwa ahụ n'onwe ya ma chekwaa mgbanwe na faịlụ ahụ na akpaghị aka.
Ọrụ ozi a na-enye anyị a dị ike gam akporo ngwa, nke anyị nwere ike iji rụọ ọrụ zuru oke nke ọrụ ọ na-enye anyị. Ọ bụ ezie na ọ dakọtara na IMAP na POP, ọ bụrụ na anyị ejiri ngwa ndị ọzọ, anyị agaghị enwe ike iji ya zuru oke.
Ọ bụrụ na anyị na-achọ a ọrụ nchekwa Iji mezue enweghị Google Drive, anyị nwere ike iji Cloud GMX, ọrụ nchekwa igwe ojii na-arụ ọrụ na faịlụ anyị, kesaa ha, soro ndị ọrụ ndị ọzọ rụọ ọrụ n'ịntanetị ...
GMX - Ozi & Igwe ojii
Koala ugbu a
Koala ugbu a sitere na Switzerland ma nye anyị ihe na-adọrọ mmasị na Gmail, ebe anyị na-enweghị ike ịnweta akaụntụ email na-enweghị karịa, mana dịka GMX, anyị nwere a dịgasị iche iche nke nhọrọ na ọrụ anyị dị ka ndị editọ faịlụ, kalenda, ọrụ, ihe edeturu, anaghị agụnye mgbasa ozi ... yana ọrụ oku vidiyo
Companylọ ọrụ ahụ anaghị edekọ ihe ọ bụla gbasara ọrụ anyị na sava ya (nke anabatara na Switzerland), kamakwa niile software eji bụ na-emeghe isi, Ya mere ị nwere ike ịlele, iji ezi ihe ọmụma, otu esi arụ ọrụ ozi a.
Koala Ugbu a abụghị n'efuKama nke ahụ, ọ na-enye anyị atụmatụ abụọ, naanị ọdịiche dị na nsụgharị kachasị ọnụ (9 Switzerland franc), ọ na-enye nkwado maka CalDAV na CardDAV, ihe nke ụdị dị ọnụ ala anaghị enye (5 Switzerland franc).
Atụmatụ abụọ ahụ gụnyere 5 GB nke nchekwama ọ bụ, ndenye aha na njedebe, nnweta weebụ, IMAP na nkwado SMTP (iji ọrụ ahụ na ndị ahịa ozi) ...
Mailfence Ọ bụ ihe ọzọ dị na Europe nke na-abịakwute anyị site na Belgium. Enyele abụọ-ihe Nyocha na izo ya ezo na-agụnye nkwado maka IMAP na POP, kama ọ bụ naanị ụdị ndị akwụ ụgwọ. Thedị nweere onwe anaghị agụnye nkwado a, yabụ na ị gaghị enwe ike iji ya na ngwa email kachasị amasị gị site na ama gị, ebe Mailfence anaghị enye ngwa maka gam akporo.
Freedị a na-enye n'efu na-enye anyị nchekwa 500 MB maka akwụkwọ yana 500 MB ọzọ iji chekwaa ozi ịntanetị. Jiri usoro nke mbinye aka dijital iji hụ na onye nnata nke akwụkwọ ozi ahụ bụ anyị nke mere na ọ nweghị ụzọ ị ga-esi tinye adreesị onye na-ezipụ ya.
Ọ naghị agụnye ụdị mgbasa ozi ọ bụla (ọ bụghị nke a na-akwụghị ụgwọ ọ bụla), ọ nwere nzacha dị ike SPAM na ndị na-eso ụzọ gụnyere ọtụtụ ozi ịntanetị mgbasa ozi anyị na-enweta, nke ị nwere ike ịchọpụta ọ bụrụ na anyị emepeela akwụkwọ ozi na ruo n'ókè anyị gụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Top 10 uzo ozo na Gmail
Gboard anaghị arụ ọrụ: ihe ngwọta niile iji dozie nsogbu a